Ny ampitson'io ihany dia tonga ny minisitra Hajo Andrianainarivelo fa ilain'ny fanjakana ny tany, ary efa tonga ireo koa ny mpanao lalana, fa misy building 9 no atsangana miaraka amin'ny orinasa SEIMAD, ary aharitra iray taona ny asa. Rehefa lasa ny Filoham-pirenena ny zoma 04 oktobra dia miverina izy ny tolak'andro mifampidinika amin'ny honitra omena ny tompon-tany.
Tonga tokoa ny zoma, nandalo nijery ny fanombohan'ny asa ny filoham-pirenena. Ny tolak'andro dia nandrasana ny minisitra fa sahirana angamba hoy ireto tompon-tany nalaina ankeriny tsy nisy fiomanana fa izao dia izao. Tonga ihany ny minisitra ny sabotsy 05 oktobra, nilaza ny andefasana ny dosie any aminy, ka ny alatsinainy miakatra any Antananarivo ireo tompon-tany voakasik'ity fakana tany ity.
Nalefa ary nomena ny Prefet Mahajanga ny dosie, nandrasana anefa ny toro-marika hiakarana any Antananarivo ahitana ny fifanarahana sy akana ny honitra, tsy nisy.
Efa ho iray volana izao, mbola tsy misy resaka mazava ny fanonerana ny tany nalain'ny fanjakana.
Ny alarobia lasa teo 23 oktobra mitatao vovonana, dia tonga tao amin'ity fianakaviana nakana tany ity olona iray mitonona ho tale kabinetran'ny ministera, raha efa somary kivy ny fianakaviana amin'ny tany nalaina tsy nisy honitra, dia velomboly indray nahita ity manam-pahefana iraka avy any Antananarivo.
Akory anefa ny ahatairana, fa nilaza indray ity mitonona ho tale kabinetra, fa ilain'ny Filoham-pirenena mihitsy ny tany rehetra hatrimin'ny misy ny faritry ny trano lehibe, hatrany amin'ny amoron-dalana rehetra, fa onerana tany mitovy refy vita borne sy anamboarana trano mitovy amin'ity efa misy ankehitriny ity fianakaviana amin'ny toeran-kafa.
Fomba fanajana no nisy fa ny fandroahana ilay manam-pahefana sisa no tsy natao, tsy nanaiky izany ny fianakaviana.
Niangavy mafy ity iraka ny tsy hilazalazana izao toe-jevatra izao amin'ny mpanao gazety.
Nantsoina ny Préfet sy ny Tale Jeneralin'ny SEIMAD fa nilaza fa tsy misy izany fakana tany hafa hanamboarana building roa hafa izany indray.
Hatramin'izao moa ilay toerana anaovana building dia lasa haolo, na mpiasa iray aza tsy misy miasa ao, ny panneau efa manomboka miala, ny tsatoka sy ny tady nanehoana ny fototra, efa mitsingidina ny maro.
Hatreto izany dia mbola tsy misy asa mihetsika ity resaka building eto Mahajanga ity, ary ny tanin'olona nalaina an-keriny tsy nisy taratasy, tsy nisy fanonerana, nefa dia nitrongisina andraisana ny fiavian'ny Filoham-pirenena hametraka ny vato fototry ny building, iray amin'ny velirano izay nataony.